Kooxda Sky Blues ka oo xusul duub ugu jirta sidii ay ku sameyn laheyd saxiixeedii sedexaad dhawaan, hadaba waa kuma? | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Kooxda Sky Blues ka oo xusul duub ugu jirta sidii ay ku sameyn laheyd saxiixeedii sedexaad dhawaan, hadaba waa kuma?
Kooxda Sky Blues ka oo xusul duub ugu jirta sidii ay ku sameyn laheyd saxiixeedii sedexaad dhawaan, hadaba waa kuma?
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 4-07-16 1:56 PM Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa ku dhaw iney sameyso saxiixeedii sedexaad xagaagan xilli ay wado kooxda macalin Pep Guardiolla dugaameysi kahor bilaabashada horyaalka Ingiriiska.
Ilkay Gundogan iyo Nolito ayaa noqday ciyaaryahanada nasiibka u yeeshay iney kamid noqdaan duulaanka Pep ee Ettihad Stadium xagaagan, balse agaasimaha kooxda Ferran Soriano ayaa meesha ku daray in kooxda ay sameyn doonto saxiixyo cusub dhawaan.
kooxaha Manchester ayaa la filayaa iney suuqa geliyaan lacago aad u badan sida lagu daabacay maqaal soo baxay horaantii bishii aynu kasoo gudubnay, hadalkaas ayaana u muuqda mid sax kadib markii ay kooxahan durba bilaabeen iney qiimo sare kula soo saxiixdaan ciyaaryahano.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in Pep Guardiola uu xaadiray xarunta tababarka kooxda Sky Blues ka subaxnimada Maanta (Isniin) kadib markii uu soo gaaray magaalada Manchester horaantii todobaadkan.